Ezi ngcebiso ziza kusindisa ixesha, amandla kwaye zifumane iziphumo ezilungileyo. Ukuhlamba izitya, uya kusebenzisa iiprogram ezigcina amandla, kwaye ngoko ke unako ukugcina i-rinse aid, ukuhlamba i powder, kwaye ngoko ke, hlamba izitya ngeendleko ezincinci. Indlela yokuhlamba izitya kwi-dishwasher, sifunda kweli nqaku.
Abanye abantu bacinga ukuba ukuba izitya zihlambulukanga kangako, i-detergent encinci yatshala. Emva koko bathululela kwi powder ngakumbi kwaye baphinde bavule i-dishwasher. Oku kakubi, kuba ayikho malunga ne-powder. Sivame ukuthulula i powder kumgca wezantsi okanye ngaphezulu, kwaye ukuba izitya zihlambulukile ukuya kumgca wesibini, kodwa kungabi phezulu.
Kwisitya sokuhlambalaza, ukuhamba kwamanzi ukuhamba kwanele ukwenza izitya zihlambuluke kakuhle. Kodwa ukuba kukho ukutya okusele kulo, ke ubeke izinto ezikhoyo kwimoto.
Izitya ezinkulu zifakwe kwimida yegridi, kwaye zibeke amacwecwe amancinci. Ukuba amacwecwe ahlambulukile, ukuba usebenzisa iiprogram zokuhlamba iindleko ezifanelekileyo, musa ukuzibeka kwiiseli zangasese zangaphandle. Ukuba bahlambuluke kangcono, bathathe kwaye bafake amacwecwe esitokisini ngasinye, kwaye ngesinye iseli, ngoko baya kuhlamba. Kwisondelelo kuthi kuthi, iiseli zikhulu, ziyi-plates.
Iifolo kunye neepuni zifakwa kwiselinye enye, kwaye kungekhona kwiiseli ezingummelwane, ngoko kulunge ukuba zihlanjwe. Iifoloko zikufuphi kumgangatho womatshini, kwaye kude nomda wangaphambili, ukwenzela ukuba xa ubeka izitya, musa ukulimala ngengozi.
Musa ukubeka izitya ngexesha elide ulawula ngokuzenzekelayo. Kule ndawo, ityala lingavimbela ukujikeleza kwengalo yombombo kwaye izitya azikwazi ukuhlamba. Musa ukubeka izibuko kwicala lakho. Akuyi kuhlambuluka kakuhle kwaye amanzi ahlala kunye ne-detergent esele kuyo. Isisombululo sibuna kwaye sihlala kwiindonga, kuya kufuneka sihlambulwe kwakhona.
Iiglasi zewayini kunye neeklasi ezijikelezayo, ukuze umlenze ube phezulu. Kukho izikhokelo ezikhethekileyo (utolo oluhlaza okwesibhakabhaka), baya kubamba iglasi. Iikomityi zibekwa ngokuzenzekelayo, ezantsi ziphezulu, njengoko amanzi aphuma ukusuka phezulu ukuya phezulu.
Kulo gridi eliphezulu, khusela zonke izinto ngokukhuselekileyo, kuba idiza yamanzi ejoliswe phezulu iya kutshintsha izitya. Xa igridi ephezulu yokubuyisela, akukho nto ifanele ixhomeke kwimoto. Ukuba ingaqinisekanga kwaye ayinakuthenjwa, yilungise.
I-pan yokutshiza kufuneka imele iqonde kwaye isebenzise iplati ephakamileyo ukuxhasa. Kule ndawo, kuthatha indawo encinci kunye namaqhekeza kakuhle. Isibambiso se-pan yokucima akufanele sithinte udonga lomhla wokuhlambalaza, kwaye ungaphazamisi ukujikeleza kweengalo zengxondorha, ukuze uqiniseke oku, kubalulekile ukuguqula ingalo yecala.
1. Ngaphambi kokuqala umatshini, kuyimfuneko ukuba ukhangele ukuba i-cover yecala lokukhusela ivalwe, ngaphandle koko le powder iya kuwela kwindawo yokuhluthwa kweziitya, kwaye ayiyi kungena kwi-sink enkulu. Kubalulekile ukucoca i-basket-net kwiindawo zokutya.
2. Kususela ngamaxesha, khangela ukuba kukho na iindawo zokutya ezitshiweyo kwi-basketball okanye kwindawo ejikelezayo. Ibhasikiti yegridi isuswe kakuhle kwaye unako ukulahla iindawo zokutya ezihlahleni, emva koko kufuneka zihlanjwe. Nangona awuyi kuhlamba izitya, faka izitya ezingcolileyo kwimoto. Kulo dishwasher, umnyango uvale kakhulu. Kwaye izidlo zokutya aziyi kuhlala "kumacwecwe kunye neepane, nangona izitya zisemotweni yonke imini.
3. Ukuba kunokwenzeka, sebenzisa iinkqubo zokonga, kuphela ngaphandle kobuqili. Ukuba umntu uyagula kwintsapho, okanye kukho iindwendwe, ungasebenzisa "inkqubo" yemoto. Umatshini kule nkqubo uza kuhlamba ngokucokisekileyo izitya, kwaye ihamba kakuhle. Kwaye lonke ixesha usebenzisa iprogram yoqoqosho, apho izitya zihlamba kwiqondo lokushisa lama-degrees ama-45, kwaye azifani ne "auto" kwii-70 degrees, eziza kugcina amandla.
4. Ukukhusela i-limecale occurrence, khusela umshini kumanzi onzima, faka inkqubo yonyango lwamanzi. Kuncinci ukukhusela ukubunjwa kwesilinganisi, kunokuba uhlawule ngaphezulu kwemiphumo - ukulungiswa kweelashershe, ukusetyenziswa kombane ngaphezulu, ukuhlamba izitya.
Iingcebiso malunga nendlela yokuhlamba izitya kwimoto zonyusa kakhulu .
1. Kwiindawo zokuhlambela iimpahla zokuhlambela, amanzi achithe amaxesha amane ngaphantsi kunokuba ahlambuluke. Isilwanyana esingasetyenzisiweyo esingaphantsi.
2. Ukulayisha ngokupheleleyo umatshini. Ekugqibeleni ukuzaliswa kwezinto eziphathekayo kwi-1 unit of dishes kuya kuba sezantsi.
3. Musa ukuhlambulula izitya ngaphambi kokukufaka kumatshini. Oku akuyimfuneko, kufuneka nje ukususa izibonelelo zokutya, ngaphambi kokubeka izitya kumatshini.
4. Khetha iinkqubo zokulondoloza amandla okuhlamba izitya.
5. Khangela ukuba yeyiphi inqanaba lokuqina kummandla kunye nokusetyenzwa komatshini okhethwe njengoluphawu.
6. Musa ukugqithisa i-detergents. I-detergent eninzi ayiyi kwenza izitya zakho zicoceke kakhulu. Ukusetyenziswa kakhulu kweekhemikhali zasemakhaya kuya kuphazamisa umgangatho wamanzi.
7. Zama ucoce icebo rhoqo kwi-dishwasher, kwaye emva kokuyicoca, faka isihlungi kwindawo efanelekileyo. Musa ukuqala umatshini ngaphandle kwesihlungi.
8. Kufuneka ugcine ixesha lakho. Ukuba usebenzisa i-dishwasher, uza kusindisa ukuya kwiiyure ezingama-300 ngonyaka, eziyi-12 iintsuku.
Ufunde indlela yokuhlamba izitya kwi-dishwasher. Siyathemba ukuba, ezi ngcebiso ziyakunceda ukuba uhlambe izitya zezoqoqosho, ngokufanelekileyo kunye ngokukhawuleza. Ukugcinwa kwamandla kulula, njengoko kulula ukulayisha i-dishwasher.
Ungakhetha njani i-LCD ye-TV efanelekileyo?
Indlela yokukhetha i-goodyushnitsu enhle?
Ukukhetha uphawu lwemoto kumfazi
Indlela yokukhetha insimbi kwizinto eziphathekayo zodwa
Beautician yonke imihla
Ukutya okuninzi okusebenzayo ku-Elena Malysheva
Iifithamini zansuku zonke kubafazi abakhulelweyo
Ikhekhe nge omisiwe
Intombi ekhulayo ibuyele kwaye ayifumani, kufuneka ndiyenze ntoni?
Iimvakalelo ezingathandekiyo kwi-anus
I-patties e-spicy yeengulube kwi-grill
Indlela yokuhlela ipikiniki?
Ijusi lomphunga ebusika ekhaya nge juicer kwaye ngaphandle kwayo - nge-orange, izaqathe namaapulo kunye nenyama
Ikhefu lokuqala lokuhlangana, ziziphi iingxaki?